Chii chinonzi Sixth Sense uye tingachikudziridza sei? - Social News Daily
Chii chinonzi Sixth Sense uye tingachikudziridza sei?
Vanhu vanozivikanwa kuti vane pfungwa shanu, asi dzakawanda masvikiro akavimbika pikisa tine pfungwa yechitanhatu. Vanhu vanoidaidzawo kuti "intuition" kana "gut feeling." Tese tine kwaniso yekushandisa kugona uku, asi zvinoda kudzidzira kukudziridza.
Sei uchida kuvandudza pfungwa yako yechitanhatu, zvakadaro? Zvakanaka, inopa mukana kune zvinhu zviri kunze kwemaitiro akajairika uye inotibvumira kuona zvinhu zviri kunze kweichi chokwadi! Asi, kana ukada kuitamba zvakachengeteka, zvinogona kungobatsira kukudziridza kusatya. Nekugadzira intuition yakasimba, inowedzera kuvimba mune yako sarudzo, izvo zvinopa simba!
Heano mamwe matanho ekusimbisa pfungwa yako yechitanhatu:
Fungisisa uye shandisa nguva mune zvakasikwa
Ita zviri nani pakufungisisa! Nokuderedza pfungwa dzedu, tinokwanisa kuverenga simba rakatipoteredza zviri nani. Kana yave nguva yekuita sarudzo, shandisa hunyanzvi hutsva uhu! Pedza nguva shoma uchifungisisa kuti ubatanidze kuti mhedzisiro yega yega inoita kuti unzwe sei.
Kupedza nguva muzvisikwa kwakatinakira. Kuburikidza nekugadzirisa kurongeka kwechisikigo uye kutarisisa kuzvinhu zvipenyu zvakatipoteredza, tinogona kutanga kucherechedza simba rinotakurwa nezvisikwa.
Teerera inzwi rako remukati
Sosaiti yakatidzidzisa kuvimba chete nezvatinogona kuona, kunzwa kana kuyera. Asi, izwi redu remukati rinowanzova rakarurama! Dzidza kuteerera. Nokufamba kwenguva, unozokwanisa kuburitsa izwi rako remukati kubva mukushushikana.
Ramba uchiverenga zviroto zvako
Pakati pehusiku, intuition yedu inokura yakasimba kwazvo. Izvi zvinodaro nekuti hatigone kuzvidzvanyirira patinenge takarara. Zviroto zvinogona kuonekwa sekuwedzera kwepfungwa yedu yechitanhatu.
Kunyange zvazvo zvisingawanzoita zvine musoro pakukosha kwechiso, zvinogona kubatsira kuzvinyora pasi. Patinoita kudaro, tinogona kuona mameseji akavanzika kana maitiro ekudzokorora. Mifananidzo nezviratidzo zvinogona kutitungamirira muhupenyu hwedu hwakamuka, kana kutipa muono mumatambudziko edu.
Zvakanakisisa kuzvinyora pasi paunongomuka, apo zvinenge zvava zvitsva mupfungwa dzako.